Mon, May 25, 2020 at 1:17pm
पोष्ट बन्यो, प्रहरी छैनन् , सुरक्षामा चुनौती, प्रहरी बिटमा मासु पसल !
बाँके, ८ असार नेपालगञ्जले दिनप्रतिदिन आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरिरहेको छ । जीर्ण सडक, पुलपुलेसा, नालालगायतका संरचनाहरूले स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । सडक चौडा पारिएका छन्, सडक रातभर झिलिमिली छन्, चोकचोकमा उच्च क्षमताका बत्ती (हाइमाष्ट) जडान गरिएको छ । शहर जति विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ, सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेरै नेपालगञ्जका चोकचोकमा प्रहरी बिट रङरोगनसहित चिटिक्क..
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध
काठमाडौँ, ८ असार । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको छ । यो सडकखण्डको जलवीरेमा आइतबार बिहान ७ बजेतिर पहिरो गएकाले गाडी चल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । गाडी नचलेपछि यात्रु बाटोमै रोकिएका छन् । अहिले पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । वर्षा याममा पटक–पटक पहिरो जाँदा यो सडक खण्डमा यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ ।..
मनसुन मध्यक्षेत्र प्रवेश, छिट्टै पश्चिम क्षेत्रसम्म पुग्ने, अधिकांश भागमा वर्षा !
काठमाडौं, ७ असार । बिहीबारदेखि नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै शुरु भएको मनसुन शनिबार मध्यक्षेत्रसम्म आइपुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार पूर्वी नेपाल हुँदै भित्रिएको मनसुन विस्तारै पश्चिम क्षेत्रसम्म फैलिने क्रममा रहेको छ । वर्षा हुने गतिविधि क्रमशः बढ्दै जानेछ । “अबको एक /दुई दिनमा मनसुन पश्चिम क्षेत्रसम्म पुग्ने छ”, मौसमविद् शान्ति कँडेलले भन्नुभयो । आज देशको अधिकांश स्थानमा..
काठमाडौँ, ६ असार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्धि, सभ्यता र शान्तितिर लैजान योग एवं ध्यानको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । पाँचौँ अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको योगाभ्यास तथा प्रवचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालीका पुर्खा ध्यानका सर्जक भएकाले नेपाललाई विश्व ध्यान केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अस्वस्थ चिन्तनबाट बच्न योग गरौँ, कर्म..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : औजार बोकेर गाउँगाउँमा पुगे युवा
भद्रपुर, ६ असार नेपालमा पहिलोपल्ट बेरोजगारहरुलाई ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ दिने गरी शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ झापामा प्रभावकारी देखिएको छ । पहेँलो हेल्मेट र ज्याकेट लगाएका युवाहरु औजार बोकेर निर्माणका काममा खटिँदा गाउँगाउँमा विकासको जागरण फैलिएको छ । झापामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारप्राप्त जनशक्तिलाई विद्यालयको रङरोगन, धार्मिक पर्यटकीयस्थलको सरसफाइलगायतका काममा परिचालन गरिएको छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये आठ नगरपालिका र छ..
यस्ता छन् योगका फाइदा
काठमाडौँ, ६ असार । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। योगका विभिन्न आसन तथा ध्यानलगायतका कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन लागिएको हो। भारतको नेतृत्वमा सुरुवात गरिएको योग दिवस मनाउन अभियानलाई संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले ११ डिसेम्बर २०१४ मा मान्यता दिएको थियो। राष्ट्र संघले मान्यता दिएसँगै २१ जुनलाई विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो। योगका फाइदा योगले मानसिक..
उफ यो प्रचण्ड गर्मी : पानीको मुहान सुक्दा जनजीवन प्रभावित, चिसो पेय पदार्थको बिक्री बढ्यो
रौतहट, ५ असार । अत्यधिक गर्मीका कारण रौतहटकोे जनजीवन प्रभावित भएको छ । विगत एक सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन छाडेकाले बजारमा चहलपहल कम देखिएको छ । गर्मीका कारण अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् भने कर्मचारी र मजदूरसमेत प्रभावित भएका छन् । गर्मी बढ्दै गएपछि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थितिसमेत पातलिएको..
सासू–ससुरालाई राम्रो हेरचाह गर्ने १७ बुहारीलाई सम्मान
बेझाड, ५ असार । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–२ को कार्यालयले सासू–ससुरालाई राम्रो हेरचाह गरेको भन्दै यहाँका १७ बुहारीलाई सम्मान गरेको छ । उमेर ढल्कँदो अवस्थामा रहेका सासू–ससुराको राम्रो हेरविचार गर्ने बुहारीलाई नगद र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो । ढल्कँदो उमेरमा रहेका सासू–ससुराको स्याहारसुसार गरेर सम्मानका साथ जिउने आधार बनोस् र आफ्ना सन्तान हुँदाहुँदै कोही पनि ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रममा जान नपरोस् भनेर यो..
टहरामा बाल मन्दिर संचालन हुँदा निमोनियाँले ६ महिनाकी बालिका बितिन्
काठमाडौँ, ५ असार । दिनभर घामको रापले गुमुक्क परेको कोठा । म्याट्रेस ओछ्याएको चिसो भुइँ । त्यही कोठामा शिशु उमेरका नानीहरू रापताप सहँदै हुर्कन्छन् । सहारा गुमेका बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै आएको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको यो कोठामा नवजातदेखि १८ महिनासम्मका बच्चा छन् । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन हेर्दा कार्यालय हो भनी ठम्याउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैको भित्रपट्टि एक अँध्यारो कोठा छ । जहाँ धर्मपुत्र/धर्मपुत्री पाल्न..
मध्यरातमा निद्राबाट ब्युँझदा भुलेर पनि नगर्नुस् यी ५ काम !
काठमाडौँ, ४ असार कोही मानिसहरु मध्यरातमा बिउँझने गर्छन् । ब्युँझिएपछि फेरि निदाउँन कष्ट गर्दा पनि उनीहरु निदाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरुले गर्न नहुने काम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ हामीले मसत निन्द्राबाट बूँझदा गर्न नहुने कामको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं । १. राति ब्युझिएपछि चुरोट पिउनु हुँदैन । चुरोट पिउनाले फेरि निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन सक्छ । किनभने चुरोटमा हुने निकोटिनले..
नेपालगञ्ज, ४ असार । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ । गाउँपालिका–३ कालाफाँटाबाट आजदेखि शुरुआत गरिएको कार्यक्रम गाउपालिका अध्यक्ष इस्तियाकअहमद शाहले शुभारम्भ गर्दै केही दिनभित्रै अन्य वडामा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण गर्न वडा नं ३ का ४२ जनालाई काममा लगाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । उनीहरुलाई..
२-३ दिनमा मनसुन भित्रिदै, देशभर वर्षाकाे सम्भावना, मौसमविद् भन्छन् - गर्मी घट्छ
काठमाडौं, ४ असार । बंगलादेश र भुटानसम्म मनसुन आइसकेको र अब शुक्रबारसम्म नेपालमा मनसुन भित्रिने देखिएको मौसमविद्ले जनाएका छन् । अब बिस्तारै तापक्रम घट्दै जाने र १, २ दिन आशिंकदेखि सामान्य बद्ली भई बेलुका धेरै ठाउँमा पानी पर्नेछ । बुधबार दिउँसो: देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही केहि स्थानहरुमा मेघ गर्जन तथा हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना छ । मनसुन सूरु हुने हुँदा गर्मी बढ्ने..
बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्न सक्छ यस्ता भयानक रोग
काठमाडौँ, ३ जेठ सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ । पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ । कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक असरबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ? धेरै सुत्नुका साइड इफेक्टबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । मोटोपना बढ्नेछः मोटोपना र धेरै समयसम्म..
उफ् यो व्यापक गर्मी, बिरामी वृद्धि, सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किनै छाडे
रुपन्देही, ३ असार अत्यधिक गर्मीका कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विगत एक सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन छाडेकाले बजारमा चहलपहल कम देखिएको छ । गर्मीका कारण अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् भने कर्र्मचारी र मजदुरसमेत प्रभावित भएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार भैरहवाको तापक्रम यो वर्षकै धेरै..
मान्छेले एक दिनमा कति मिनेट अरुको कुरा काट्छ ?
काठमाडौँ, २ असार चाहे जोे जस्तो सुकै मानिस होस् दिनमा एकपटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा गरेकै हुन्छ । कसैको कुरा काट्ने बानी हुन्छ भने कतिले प्रशंसा र राम्रो नियतले पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा एउटा नयाँ अनुसन्धानपछि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अध्ययनकर्ताहरुले मान्छेले दिनमा करिब १ घण्टा अरुका पछाडि कुरा गर्ने अर्थात ‘गसिप’ गरेर बिताउने गरेको खुलासा गरेका छन् । यसका..
मङ्गलबारदेखि गर्मी कम हुने, मनसुन भित्रिन केही दिन ढिलो !
काठमाडौँ, २ असार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर गर्मी बढेको छ । केही दिनदेखि प्रि–मनसुन कमजोर भई वर्षा नहुँदा तापक्रम वृद्धि भई गर्मी बढेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस वर्ष मनसुन शुरु हुने समयमा पनि मनसुन सक्रिय हुन् नसक्दा देशभर अत्यधिक गर्मी महसुस भएको महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही दिनदेखि उपत्यकासहित देशभर कुनै पनि मौसमी प्रणाली विकसित..
यस्ता छन् आलु बखडाको फाइदाहरु
एजेन्सी, २ असार गर्मी सिजनमा पाइने आलु बखडा स्वादको लागि मात्रै होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक रहेको छ । पाकेको आलु बखडा गुलियो हुने कारणले पनि सबैको छनौटमा पर्ने गरेको छ । मिठो फलफुलको सूचीमा पर्ने यसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन, खनिज, फाइबर र एन्टीअक्सीडेन्ट पनि पाइने गरेको छ । यसलाई पखालेर त्यसै पनि खान सकिन्छ भने यसलाई सुकाएर खाँदा पनि स्वादिलो..
सीपमूलक तालीम सञ्चालन, सीप सिकेकामध्ये ७० प्रतिशत रोजगारोन्मुख
नेपालगञ्ज, २ असार नेपालगञ्ज—१ धम्बोझीकी सुमित्रा सारु मगरलाई सीप सिकेर व्यवसाय गर्ने चाहना छ । त्यसैले अहिले उनी नेपालगञ्जस्थित व्यावसायिक तालीम केन्द्रमा सिलाइकटाइ सम्बन्धी तालीम लिइरहनुभएको छ । ‘तालीम लिएपछि कसैसँग काम माग्न जानु पर्दैन, आपैmले रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ र परिवारको गर्जोे टार्न सकिन्छ’—सारुमगरले बताउनुभयो । सारुमगर जस्तै केन्द्रवाट विभिन्न व्यवसायमूलक सीपको तालीम लिनेको सङ्ख्या यो वर्ष ६०० भन्दा बढी रहेका..
छोरी जन्मिए खातामै १ हजार, २० वर्षसम्म शिक्षा र लालनपालनमा महिनाको ५००
वीरेन्द्रनगर, २ असार । कर्णाली सरकारले छोरी जन्मिए बैंक खाता खोली एक हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत छोरीको शिक्षा र लालनपालनका लागि २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा छोरीको सुरक्षाका लागि रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । “छोरीको लालनपालन र..
“खुशीको अभिव्यक्ति हाँसो हो, नहाँस्ने मान्छेलाई अरुले नियन्त्रणमा राख्छ”
बागलुङ, २ असार । प्रेक्षालय खचाखच छ । मानिसहरू पलेँटी कसेर बसेका छन् । मञ्चपट्टि हुनुहुन्छ, योगगुरु डा योगी विकासानन्द । योग प्रवचन र अभ्यास चलिरहेको छ । छिनछिनमा अट्टहास हाँसोले पे्रक्षालय गुञ्जिन्छ । यहाँका योगप्रेमीले पछिल्ला तीन बिहान यस्तै माहोलमा कटाए । मज्जाले हाँसे । खुसी हुन सिके । “खुशीको अभिव्यक्ति हाँसो हो”, योगगुरु डा योगी विकासानन्दले भन्नुभयो, “हाँसोले समाज र..
२० चेपाङलाई रोजगार, युवालाई सडक निर्माणको जिम्मा
आईतवार, आषाढ १, २०७६ साल
मुग्लिन, १ असार । चितवनको कालिका नगरपालिकाले २० चेपाङलाई रोजगार प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त नगरपालिकाले वडा नं ११ को दाबलिङका चेपाङ युवालाई आजदेखि सडक निर्माणको कामको जिम्मा दिएको हो । एसएलसी दिएपछि पाँच वर्षअघिदेखि आफू बेरोजगार भएर रोजगारको खोजीमा रहेका बेलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू भई फाराम भरेर रोजगार हुन पाउँदा निकै खुशी लागेको अस्मिता चेपाङले बताउनुभयो ।..
काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षकै उच्च तापक्रम, मनसुन ३-४ दिनपछि मात्रै !
काठमाडौँ, ३२ जेठ अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्षकै बढी गर्मी महसुस गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दुई दिनदेखि काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३३ र न्यूनतम तापक्रम १९ दशमलव ४ डिग्री पुगेको छ । हिजो शुक्रबार काठमाडौँको अधिकतम ३३.५ र न्यूनतम १९ डिग्री सेल्सियस थियो । काठमाडौँको तापक्रम वर्षको उच्च..
पानी खोजेर दिनचर्या चलाउने दिन गए ! गाउँमा खानेपानी पुगेपछि खुशी छन् मौलाथरवासी
बेझाड, ३१ जेठ । बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै पानी बोक्ने पिरलो हुन्थ्यो मौलाथरकी रिसिमाया खन्गाहालाई । उहाँले गाउँमा पानी आउँछ र सहजसँग उपभोग गर्न पाइएला भनेर कहिल्यै पनि कल्पना गर्नुहुन्नथ्यो । अहिले भने गाउँमा खानेपानी आएको देख्दा उहाँलाई सपना जस्तै लागेको छ । “पानी गाउँमै आएर सजिलोसँग पिउन पाइन्छ भन्ने आशा लागेको थिएन, एक दुई घण्टाको समय बिताएर..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न योजना छनौट, धमाधम काममा खटाईदै
दमौली, ३० जेठ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको सो कार्यक्रममार्फत शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ को दुलेगौँडादेखि शव दाहघाटसम्म जाने सिढी निर्माण थालिएको छ । उक्त वडाका २२ जनाले न्यूनतम रोजगारमा सङ्लग्न हुन निवेदन दिएकोमा १० जनालाई काममा खटाइएको रोजगार सेवा केन्द्रका प्रमुख प्रतिभा जिसीले जानकारी दिनुभयो । जिसीका अनुसार शुक्लागण्डकी..
स्थानीयवासी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा व्यस्त, निर्माणको काम अलपत्र, विद्यार्थी नआउँदा शिक्षक घाम ताप्दै
जाजरकोट, ३० जेठ । स्थानीयवासी डोल्पाका विभिन्न पाटनमा पाइने यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि गएपछि जाजरकोट र डोल्पाका गाउँमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । विकासे कामदेखि विद्यालयमा पढाइसमेत प्रभावित हुँदै समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य सामुदायिक वनले डोल्पामा जेठ १३ देखि असार २५ सम्मका लागि जिल्लाका पाटनमा यार्सा सङ्कलन खुला गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा..
के तपाईँ पाइन्टको पछाडिको गोजीमा पर्स राख्नुहुन्छ ? लाग्न सक्छ यस्ता गम्भीर रोग
काठमाडौं, २९ जेठ पुरुषहरू प्रायः आफ्नो पाइन्टको पछिल्तिरको गोजीमा पर्स वा वालेट राख्ने गर्छन् । तर यसरी वालेट राख्दा गम्भीर रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यसरी वालेट राख्ने व्यक्तिहरूलाई पाइरिफर्मिस सिन्ड्रोम नामक रोग लाग्छ । यो रोग लागेको व्यक्तिलाई नितम्बमा असह्य पीडा हुन्छ । पाइन्टको गोजीमा पर्स राखेर घन्टौंसम्म बस्ने मानिसको नितम्बमा हुने पाइरिफर्मिस मांसपेशी थिचिन्छ र यसकारण खुट्टामा पनि समस्या आइलाग्छ ।..
बुधबार जन्मिएका मान्छेसँग यस्ता हुन्छन् गुणहरु ...
काठमाडौँ, २९ जेठ धेरै मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा निकै नै प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ, त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । तर यहाँ चाहिँ भारतीय अंक ज्योतिष तथा अनुसन्धानकर्ता श्रीमती ज्योति शर्माले बुधबार..
विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस : नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख बालश्रमिक
काठमाडौँ, २९ जेठ । नौ वर्षका नहकुल रानाभाटले बालाजुस्थित नयाँ बसपार्क नजिकैको धौलागिरि होटेलमा भाडा माझ्ने काम गर्न शुरु गरेको एक वर्ष भयो । तर उनले अहिलेसम्म बस्न र खानबाहेक कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन् । बाग्लुङका नहकुल जस्तै धादिङका ११ वर्षीय कमल खपाङ्गीले मैतीदेवी क्याफेमा सहयोगीको रुपमा काम गरेको छ महीना भयो । पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका..
नेपालमै पहिलोपटक घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स
रत्ननगर, २९ जेठ नेपालमै पहिलोपटक वन क्षेत्रमै पुगेर घाइते तथा बिरामी हुने वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स खरीद गरी ल्याइएको छ । सरकारको भन्सार छुटमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सौराहामा सञ्चालनमा आउन लागेको वन्यजन्तु अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स ल्याएको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सौराहाका निमित्त प्रमुख रामकुमार अर्यालले रु २५ लाख लागतमा एम्बुलेन्स ल्याइएको बताउनुभयो । एम्बुलेन्सले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत तराईका सबै जिल्लामा..
पश्चिमी वायु सुदुरपश्चिम हुँदै नेपाल छिर्‍यो, फेरि ठूलो हावाहुरी, स्थानीय आतंकित
काठमाडौँ, २९ जेठ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रणाली सुदुर पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको जानकारी गराएको छ । यो प्रणालीले हावाहुरीसहित मेघ गर्जन गराउने र मध्यम खालको वर्षा गराउने सम्भावना रहेको समेत पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । एक हप्ताअघि मात्र भीषण हावाहुरीका कारण ठूलो क्षति पुगेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बुधबार बिहानैदेखि वर्षासँगै ठूलो हुरीबतास चलेपछि स्थानीय बासिन्दा आतंकित भएका छन्..
Results 740: You are at page 11 of 25